Maamuladda Jubbaland & Puntland oo sheegay in uu fashil ku dhamaaday shir ay la yeesheen DFS | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maamuladda Jubbaland & Puntland oo sheegay in uu fashil ku dhamaaday shir ay la yeesheen DFS
Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ka hadlay Shirarkii dhawaan ku qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka ah ee ay yeesheen Dowlada Federaalka ah iyo Dowladaha xubnaha ka ah iyo go’aanka gudiga joogtada ah ee Aqalka Sare.
Qoraal kasoo baxay Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in Jubbaland ay ka qeyb gashay Saddex kulan oo looga hadlayay sida uu ku qabsoomi karo shir wadatashi ah oo dhex-mara Madaxda Dowladda iyo Dowlad goboleedyada,hayeeshee kulamadaasi ay fashil ku dhamaadeen.
Jubbaland waxaa ay sheegtay in Xafiiska Madaxweynaha uu sabab u ahaa fashilka ku yimid kulamada,isla markaan waxyaabah ugu weyn ee la isku fahmi waayay ay kamid ahaayeen waqtiga la qabanayo shirka iyo halka lagu qabanaayo.
Jubbaland ayaa sidoo kale soo dhaweeysay hadalkii dhawaan uu sheegay Ra’iisul Wasaare kheyre ee ahaa in doorashada waqtigeeda ku dhaceyso iyo qoraalkii xalay ee Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Dhinaca kale Maamulka in ay ka qeyb qaadatay kulan ay ku tashanayeen Guddi loo xil saaray qabashada kulan dhex-mara Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada,balse kulankaas uu kusoo dhamaaday natiijo la’aan.
Puntland ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ay ku eedeysay in uusan weli kasoo jawaabin gogoshii ay u fidiyeen Madaxda Dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada iyo inay madaxda ka caga jiidayaan in Madaxweyne Deni uu booqasho ku tago Magaalada Muqdisho.
Maamuladda Jubbaland & Puntland oo sheegay in uu fashil ku dhamaaday shir ay la yeesheen DFS was last modified: June 10th, 2020 by Admin